Fitokanana orinasa mpanokatra Ethanol, 33km miala Toamasina amin’ny RN5
Vinavinaina fary 30 tonnes isan’andro no ilaina amin’ny famokarana
Nitokanana tamin’ny asabotsy 13 desambra lasa ny orin’asa ETAMAGA mpamokatra ethanol, ao fokotany Ankadirano, Firaisana Foulpoint, 33 km miala ny Toamasina renivohitra. � Natsangana ny orin’asa nohon’ny fiovaovan’ny toetr’andro eto Madagasikara mba hisiana fambolena fary zay hanampy amin’ny fanatsarana ny toetr’andro, eo ihany koa ny fiezahana hihiditra amin’ny energie renouvelable � hoy Rtoa Claudine TSE, Tompon’adraikitra voalohany sy tompony ny orinasa.
Lanonana nantomboka tamin’ny fivavaha sy fisaorana ny Andriamanitra, narahan’ny kabary nifandim-biasana ary ny fitsofandrano. Nisy ny fiaraha-misakafo sy ny fiaraha mifety izay namaranana ny lanonana. Tonga nanatrika ny fitokanana ny solon-tenam-panjakana maro avy amin’ny foibe sy ny avy eto antoerana. Natolotra ho any orinasa tamin’io andro io ny taratasy fahazahoana alalana hamokatra ny Ethanol.
Ny ethanol dia alcool azo avy amin’ny fary, azo ampiasaina amin’ny zavatra maro, azo atao fandrehitra ao antokatrano, azo ampiasaina amin’ny fanadiovana fitaovana, sns. Tsy mifidy karazany fary izy ity fa mety avokoa ny fari rehetra izay misy amin’ny faritra, sady mbola manana ny toerana maha izy azy ny faritra Toamasina raha ny fary no resahina.
Fary 30 tones isan’andro no ilain’ity orinasa ity raha tena miroso amin’ny famokara, izay mety hahazahoana 300 hl hoy Atoa Etienne, Chef d’usine.
Mbola andrana fanodinana ny milina sy famokarana vitsivitsy no natao ka vinavinaina ho amin’ny volana may 2015 any vao miroso mafy amin’ny famokarana satria mbola andalan-mpikarohana ny lalam-barotra andehafana ny vokatra; eo ihany koa ny fiandrasana ny fitaovana nafarina mba ampiasana ny etanol toy ny receau izay mifanaraka aminy hoy ihany Rtoa Claudine TSE.
Naneho ny hafaliana ny fokotany Ankadirano, izay nisoloin’ny filoha fokotany tena Atoa Justin, satria tombony betsaka amin-jareo ny fisian’ny fotodrafitr’asa toy itony, misy mpividy ny vokatra tantsaha, mampanana asa ny mponina ao antoerana sady mampiroborobo ny fokotany ihany koa.
(95) Lantomalala S. : 15-12-2014 - 15:00